Maxaa keenay Fara-galinta Shisheeye ee doorashadda Soomaaliya? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa keenay Fara-galinta Shisheeye ee doorashadda Soomaaliya?
30-kii sano ee ugu danbeysay waa mid aad u baaheysay fara-galinta ay dowladdaha shisheeye ku hayaan arrimaha siyaasada Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Fara-galintan ayey qubaradu ku macneynayaan mid ka dhalatay bur burkii ku yimid heykalkii dowladnimo ee Soomaaliya, kaasoo dalka dhaxal siisay in arrimahooda masiiriga ah ay ka talo galiyaan wadamada ajaanibta ah.
Caqabada ugu horeysa ee fara-galinta ayaa ka dhalatay in dhaqaale ahaan aanay isku filneyn Soomaaliya, waana tan oggolaaneysa in dowladdaha caawiya ay toos u saameyn ugu yeeshaan siyaasadda dalka.
Dallaalliinta Siyaasadeed oo ka wakiil ah kuwa ku loolamaya kursiga dalka ugu sareeya, ayaa iyaguna kaalin weyn ku leh fara-galinta, kuwaasoo dowladdaha caalamka ka dalbada dhaqaale saamaxaya in dalalkaasi shisheeye uu saameyn ku yeesho siyaasadda Soomaaliya, kadib marka uu doorashadda ku soo baxo shaqsiga ay taageereen.
Marka laga yimaado dowladdaha reer galbeedka, Dalalka Afrikanka ah ee aan sohdimaha wadaagno iyo kuwa carabta ayaa door aan la dafiri karin ku leh arimaha Soomaaliya, waxanna wadammada carabta ay sanadihii ugu danbeeyey dar dar galiyeen saameyntooda, iyagoo xitaa tartan u gala in kursiga dalka ugu sareeyo uu ku fadhiisto siyaasi ay iyagu wataan.
Arrintan waa mid hadal heyn badan ka dhex abuurtay guud ahaan shacabka, kuwaasoo walaac ba'an ka muujinaya marinka ay siyaasiyinta dallaalliinta ah ku wadaan jiritaanka qaranimada Soomaaliya.
Fara-galinta shisheeyaha ku hayaan Soomaaliya, ayaa la tilmaamayaa in ay adag tahay in dalku uu ka kabsado, maadaama ay arrintaasi baajin karto hoggaan aan dhaqaale doon ahayn oo hanta qaluubta shacabka iyo guud ahaan xuduudaha dalka, taasoo ah mid aan ifa-faalaheedu muuqan.